Loko volo izay mirona amin'ity fararano 2021 | Bezzia
Ny fironana lehibe amin'ny loko volo amin'ity fararano ity
Susana godoy | 08/09/2021 12:00 | beauty
Raha misy fironana lehibe amin'ny lamaody amin'ny vanim-potoana vaovao, dia hisy ihany koa amin'ny lafiny loko volo. Satria aorian'ny andro amoron-dranomasina sy pisinina dia misy hatrany ny fikarakarana sy fanavaozana. Ho maina kokoa noho ny mahazatra ny volonao ary saika tsy maintsy mandehana any amin'ny mpanao volo.
Noho izany, raha te hanararaotra ny fotoana voatondro ianao mba hahafahanao mivoaka miaraka iray amin'ireo loko volo fironana, antoka fa ara-potoana ianao. Satria ho hitanao ny fahasamihafan'izy ireo, ary koa ny fandokafana. Noho izany, azo antoka fa efa maniry ny hankafy ireo karazany rehetra atolotray anao ireo ianao anio. Vonona ve ianao?
1 Ny blonde miaraka amina mavokely amin'ny lokon'ny volo latsaka
2 Miverina indray ny volon'ny sôkôla, fa miaraka amin'ny nuansa
3 Ny blonda volamena
4 Ny mena varahina eo amin'ny loko volo tiana indrindra
Ny blonde miaraka amina mavokely amin'ny lokon'ny volo latsaka
Ireo famoronana feno nofinofy dia iray amin'ireo safidy izay tena mitaky fangatahana betsaka indrindra. Tsy miresaka momba ny feo mahery isika fa momba ny fikasihana an-kolaka izay hiteraka originality kely amin'ny volo. Voalaza fa handeha tsara ho an'izay rehetra manana fototra volontsôkôlà na mikasika kely amin'ny volony izany. Satria raha manana maizina be ianao dia izao angamba ny fotoana miloka amin'ny alokaloka hafa izay maizina koa. Manomboka amin'ity dia tsy maintsy lazaina koa fa mety tsara ho an'ny volo fohy na volo antonony. Satria manampy toetra bebe kokoa izy ireo nefa tsy misy famaranana mavesatra, izay no tena tadiavintsika. Ho fanampin'izay, tsara kokoa hatrany ny misafidy andian-dahatsoratra an-dàlana hifanohitra amin'ny lokonay. Na dia amin'ity tranga ity aza dia ianao sy ny taovolo no hanana ny teny farany.
Miverina indray ny volon'ny sôkôla, fa miaraka amin'ny nuansa
Fantatray fa tsy tena lasa izy io. Fa ny loko mahery sy maizina indrindra amin'ny volo dia mandresy foana. Noho izany, eo amin'ny loko volon'ny volo amin'ity lohataona ity dia misafidy sokola isika. Famaranana volontsôkôlà matroka ho hita be izany. Fa io koa dia tsy ho avy foana satria fotsiny hoe hahita alokaloka mamiratra kokoa isika, hanomezana firindrana ny volo. Na amin'ny tranga sasany aza, somary mikitikitika mena, mba hanomezana azy boky betsaka kokoa nefa zara raha hitan'ny maso.
Ny blonda volamena
Izy io dia mety manana nuansa maro, fa Ny blonda volamena dia hisy eo amin'ireo tianay indrindra, na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Fa marina fa taorian'ny fahavaratra ary efa ela be tamin'ny masoandro dia ilaina ny mandanjalanja ny volon'ny volo amin'ny hevitra toy izao. Tianay ny hitazona ny feo mavitrika indrindra fa mitandrina foana, noho izany antony izany, dia mamirapiratra voajanahary toy ny volamena isika. Azonao atao ny miloka foana amin'ireo fitambarana fa tena hamela antsika hamaranana manjelanjelatra kokoa sy voajanahary kokoa. Inona koa no angatahintsika?
Ny mena varahina eo amin'ny loko volo tiana indrindra
Betsaka ny feon'ny varahina izay mandresy satria miloka amin'ny maha-izy azy izy ireo ary mamirapiratra ohatrinona no itiavantsika azy rehefa tonga ny vanim-potoana toy izao. Noho izany, herintaona indray dia tsy tianao ny tsy hahita an'ity diabe miloko volo izay tokony ho hitanao ity. Raha manana volo somary voasazy hatramin'ny fahavaratra ianao dia efa safidy mety io satria hanome anao fahazavana fanampiny sy voajanahary amin'ny famirapiratana. Ny varahina dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny hoditra madio, fa raha somary maizina ny lokonao dia azo omena hamafisana kokoa izany fa hisintona kely mankany amin'ny loko mena. Amin'izany dia hampitombo ny hamafin'ny tavanao izany. Noho izany dia tena hanisy soa anao izy io. Satria izy ireo dia azo ampiasaina ho taratra ary izany dia hatao amin'ny volo mainty kokoa. Raha tianao ny loko, dia ho hitanao ny alokaloka tonga lafatra hanasongadinana ireo fiasao rehetra. Inona no loko nofidinao amin'ny vanim-potoana vaovao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Ny fironana lehibe amin'ny loko volo amin'ity fararano ity